အခမဲ့ REALTEMP များအတွက်နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
IPTV န်ဆောင်မှုများ၏လူကြိုက်များလျှင်မြန်စွာအထူးသဖြင့်စမတ်တီဗီစျေးကွက်၏ထွန်းနှင့်အတူအရှိန်အဟုန်ရရှိမှုဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက် TV ကိုအခွင့်ကောင်းကို ယူ. ဖြစ်နိုင်သောနှင့် Android ပေါ်မှာဖြစ်ပါသည် - ဒီရုရှားဆော့ဖ်ဝဲရေးသူ Alexey Sofronova ထံမှ IPTV Player ကို app ကိုကူညီပေးပါမည်။
playlists နှင့် URL ကို-လင့်များ
သူ့ဟာသူများတွင်လျှောက်လွှာ IPTV န်ဆောင်မှုပေးမထားဘူး, ဒါကြောင့်အစီအစဉ်ကြိုတင်ရုပ်သံလိုင်းစာရင်းထဲမှာလိုအပ်ပါသည်။
သီချင်းစာရင်းကိုပုံစံ - အများအားဖြင့် M3U, ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူသည်အခြားပုံစံများအဘို့အထောက်ခံမှုချဲ့ထွင်ရန်ကတိပေးထားတယ်။ မှတ်ချက်: တချို့ကပံ့ပိုးပေး multicast ကိုသုံးပါနှင့်, Player ကို၏မှန်ကန်သောစစ်ဆင်ရေး installed ရမည်ဖြစ်သည်များအတွက် AyPiTiVi UDP ကို-proxy ကို။
အဆိုပါ IPTV Player ကိုအဘယ်သူမျှမ built-in ကစားသမား။ MX Player ကို, VLC, အန်စာတုံး, နှင့်အခြားသော - ထိုကြောင့်, စနစ် streaming များအဘို့ထောက်ခံမှုနှင့်အတူအနည်းဆုံးကစားသမား installed ရမည်ဖြစ်သည်။
တစုံတယောက်သောသူသည်ကစားသမားမှချည်ထားသောခံရဖို့မရှိစေရေးအတွက်, သငျသညျရှေးခယျြနိုငျ "ကို Select လုပ်ပါသည့်စနစ်" - ဤအမှု၌, တစ်ဦးချင်းစီအချိန်စနစ်တစ်သင့်လျော်သောအစီအစဉ်၏ရွေးချယ်မှုနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာရှေးခယျြသောအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီပြသစာရင်းနေသူများကဖန်တီးသည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကျိုးနပ်သည်။ တဖကျတှငျ - တစ်ဦးအဆင်ပြေဖြေရှင်းချက်ပေမယ့်အခြားအပေါ် = အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်ကိုကြိုက်မည်မဟုတ်ပါ။
စီးအရေအတွက်, အမည်သို့မဟုတ်လိပ်စာ: IPTV သတင်းရင်းမြစ်စာရင်းကိုဖေါ်ပြခြင်း parameters များကိုတစ်ဦးကိုအရေအတွက်အားဖြင့်ခွဲထားခဲ့သည်နိုင်ပါသည်။
မကြာခဏဒါရရှိနိုင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကုလားဖန်ထိုး, updated ဖြစ်ကြောင်းဖွင့်စာရင်းများကိုများအတွက်အဆင်ပြေ။ ဒီနေရာတွင်ကြည့် customize နှင့်နိုငျသညျ - တစ်ရုပ်သံလိုင်းစာရင်းထဲမှာတစ်ဦးဇယားကွက်သို့မဟုတ်အုပ်ကြွပ်ဖော်ပြရန်။
ကစားသမား AyPiTiVi set-top မှတီဗီ mnogodyuymovomu ချိတ်ဆက်ထားသောသေတ္တာကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဒါဟာအသုံးဝင်သည်။
ဒါဟာမတရားတဲ့ရုပ်သံလိုင်း၏လိုဂိုကိုပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအပိုဒ်အတွက် Context Menu က (channel ကိုအပေါ်ရှည်လျားထိပုတ်ပါ) ထံမှထွက်ယူသွားတတ်၏ "ပြောင်းလဲခြင်းလိုဂို".
သင်သည်မည်သည့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲနီးပါးမည်သည့်ပုံရိပ်ကိုမသတ်မှတ်နိုင်ပါ။ သငျသညျရုတ်တရက် default အနေနဲ့ပြည်နယ်ဖို့လိုဂို၏ပုံစံကိုပြန်သွားဖို့လိုအပျပါ - ထို setting များကိုတစ်ဦးသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာသည်ရှိသေး၏။
အများကြီးခရီးသွားလာသူကိုအသုံးပြုသူများအတွက်ပြုလုပ်သည့် option တစ်ခုဖြစ်သည် "တီဗွီရှိုးအချိန် Shift".
ကျယ်ပြန့်တဲ့ display setting ကို;
အဆိုပါအခမဲ့ဗားရှင်း5သီချင်းစာရင်းများကန့်သတ်ထားသည်,
IPTV Player ကို, အင်တာနက် TV ကိုကြည့်ရှုရန်အရှိဆုံးအမှိုက်ပုံ application ကိုမဖွစျနိုငျသညျ။ သို့သော်ရိုးရှင်းများနှင့်လွယ်ကူခြင်းအသုံးပြုမှုအဖြစ်ကွန်ယက်မှတဆင့်အများအပြားထုတ်လွှင့်ရွေးချယ်စရာများ၏ထောက်ခံမှုသူ့ဘက်မှာ။
IPTV Player ကိုအစမ်းဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်
ကို Google Play စတိုးနှင့်အတူလျှောက်လွှာ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်
ဗီဒီယို Watch: How To Check CPUGPU Temperature (အောက်တိုဘာလ 2019).